Warshadda Qashinka Bin - Shiinaha Soosaarayaasha Qashinka Bin, Alaab-qeybiyeyaasha
Is-rogidda qashinka ayaa noqon kara qashin ganacsi oo kale. Daasadahaani waxay ku habboon yihiin dhacdooyinka warshadaha iyo kuwa waaweyn, guud ahaan aaggan wuxuu lahaan doonaa qashin badan, qashin waaweyn. Goobaha dadweynaha sida iskuulada ama fagaarayaasha sidoo kale waxay u baahan yihiin uruurinta waraaqo badan, dhalooyin, ama gasacado, qashinka is rogaya ayaa aad loo doortaa.
Soo bandhigida qaab-muuqaal hooseeya, caag qashin-qashin / qashin qashin ah oo leydi afar gees ah ayaa aad ugu fiican xafiisyada iyo isticmaalka guriga hortiisa ee makhaayadaha. Naqshadeynta soo jiidashada leh ee qashinkan qashinka ah waxaa lagu buuxiyaa midabaynta iyo cabirka kaladuwan ee kaladuwan. Waa wax weyn oo lagu daro martidaada / hoygaaga martida, ama u isticmaal gadaasha miiska dukaankaaga yar yar si ay shaqaalahaagu si dhakhso ah ugu tuuraan wixii waraaqo ah ee aan loo baahnayn, ama xitaa loo isticmaalo miiska.
23L / 42L Balaastiig caag ah oo laba jibbaaran oo leh dabool-B031 B032
Weelalka loo yaqaan 'Deskside' waa kuwo wax ku ool ah, dhaqaale ahaan, isla markaana ah wax fudud oo wax ku ool ah qashinka iyo dib-u-warshadaynta qashinka.
23L / 42L / 58L Quadrate Uruurinta Bin -B-013 / B-014 / B-015
Tani waa tan aad u wanaagsan ee qashinka aan taabashada lahayn ee dabool leh, waxay dabooli kartaa qashinka wasakhda ah, luliddu waxay kaa ilaalin doontaa inaad taabato weelka qashinka.
58L Wareejinta Daboolka Uruurinta Bin-B016D / B016E
Dhismaha balaastigga oo dhami ma burburi doonaan, miridhku ma dhici doono. Wareegyada duudduuban waxay ku daraan xoog, wayna fududahay in la nadiifiyo.
58L Warqad Qashin Ururinta Bin-B-016A / B-016B / B-016C